स्थान: घर » पोष्ट गर्दै » ब्रेकिंग यात्रा समाचार » चीन चुनौतीमा मोरिशस पर्यटनमन्त्री
बुधबार पर्यटन मन्त्री अनिल गायनले "चीन चुनौती" भन्ने विषयमा बोले। यो गत महिना हेन्नेसी पार्क होटल, एबेनीमा आयोजित दिमागमा आधारित सत्रको समयमा भएको थियो:
एयर मोरिससका सबै वरिष्ठ कर्मचारीहरू,
होटलका सबै प्रतिनिधिहरू,
चीन पर्यटन व्यापार को सरोकारवालाहरु,
तपाई सबैको लागि धेरै राम्रो दिउँसो!
महिलाहरू र सज्जनहरू, मलाई सबैभन्दा पहिले भन्न दिनुहोस् कि मलाई अफसोस छ कि म यस महत्त्वपूर्ण कामको सत्रमा तपाईसँग हुन सकेको छैन जुनलाई मैले “चीन चुनौती” भनेर बोलाउने छु।
म पक्का पनि छु कि तपाईंले ती सबै मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ जसले चीनबाट पर्यटक आगमनलाई प्रतिकूल असर गरेको छ।
चीन पर्यटन मा हाम्रो अनुभव को इतिहास दुर्भाग्यवश निराशाजनक छ। म दोष र श्याम व्यायाममा भाग लिन चाहन्न किनकि यो व्यर्थ हुनेछ। तर आज यहाँ मेरो उपस्थिति निम्न मुद्दाहरूको अन्वेषण गर्न हो:
के चीनमा हाम्रो प्रमोशनको अवस्थित मोडेल सहि छ? यदि होईन भने, हामी किन गलत मोडेलमा शुरू गर्यौं? पहिले नै भएको सबै क्षतिलाई अन्डु गर्न हामीले अब के गर्नुपर्दछ?
मैले आफ्नो कथनको सुरूमा भनें कि म चीनको प्रदर्शनबाट निराश छु किनकि तपाईलाई थाहा छ धेरै अघि नै हामी लगभग १०००० चिनियाँ पर्यटक मोरिसस आएका थियौं। आज हामी 100००० भन्दा कम उमेरका छौं। त्यसोभए के भयो त?
के हामी हाम्रो पर्यटन उत्पादन सही मार्केटिंग गर्दैछौं? के हामी अझै पनि हरियो गन्तव्यको रूपमा चीनमा मोरिससको बजार गर्न सहज छौं? वा चिनियाँ पर्यटकहरू केहि अरु खोजिरहेका छन्?
के अवस्था सम्बोधन गर्न सम्भव छ? के एयर मोरीशस र म आज दिउँसो एयर मोरीशसका सबै ठूला शटहरू देख्न पाउँदा खुसी छु? के एयर मॉरिशस एकल वाहक हो जुन यस बजारको विकासका लागि प्रतिबद्ध छ?
म सुन्न रहन्छु कि एयर मोरिससको चीन उडान गर्न लागत धेरै बढी छ। र उनीहरूले त्यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। के चीन उडानको लागत वास्तविक छ? के हामीसँग इमान्दार मूल्या and्कन र लागतको एक ब्रेकडाउन पाउन सकिन्छ कि एयर मोरीशसले हामीलाई बताइरहेको कुरा चीनमा उडान गर्ने अन्य एयरलाइन्सको लागतसँग तुलना छ कि छैन भनेर।
म यी मुद्दाहरू उठाउँदै छु किनकि म पक्का छु कि तपाईंले दिनको क्रममा तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्नु भएको थियो। म सबै पर्यटन सरोकारवालाहरुलाई बताउँछु कि मूल्य संवेदनशीलता सबैको लागी एक चिन्ताको विषय हो र हामीले यात्रुको छनौट छ भन्ने तथ्यलाई हामीले बेवास्ता गर्नु हुँदैन। हामी के प्रस्तावमा नम्र हुनुपर्दछ र हामी के प्रस्ताव गर्छौं व्यावहारिक र सस्तो हुनै पर्छ।
तर सबै भन्दा पहिले म तपाईंलाई यो मा मेरो आफ्नै व्यक्तिगत विचार दिन दिनुहोस्। म चीनको साथी हुँ, म धेरै अवसरमा चीनमा छु र मलाई विश्वास छ कि मौरिसको घनिष्ट मित्र चीन हो। र मित्रहरु बीच हामी एकसाथ काम गर्न सक्षम हुनुपर्दछ हामी कसरी मित्रता मा सुधार गर्न सक्दछौं र कसरी हेर्न को लागी जानेछ हाम्रा धेरै साथीहरु हामीलाई भेट्न जान्छन् र बढी मौरिशहरु पनि चीन जाँदैछन्। त्यसैले यो आधार आज म अपरेट गर्दै छु।
त्यसकारण, महिलाहरू र सज्जनहरू, म चीनलाई हाम्रो पर्यटन उद्योगको महत्वपूर्ण साझेदार भएकोमा विश्वास गर्दछु। तर हामीले सोध्नु पर्ने प्रश्न के हामी चिनियाँहरूका लागि तयार छौं?
के हामी व्यवस्थित रूपमा चिनियाँलाई हाम्रा उडानहरुमा, एयर मोरिससको उडानहरु र होटलहरुमा घरैमा महसुस गराउँछौं? जस्तो तपाईलाई थाहा छ कि आउटबाउन्ड पर्यटकहरुको संख्या चीनमा छ र यो संख्या बढ्दो रहनेछ। के हामी चीनलाई वेवास्ता गर्न सक्दछौं र यदि हामी चीनलाई वेवास्ता गर्छौं भने के यो हाम्रो राष्ट्रिय हितमा हुनेछ?
मलाई सूचित गरिएको छ कि केवल १०% चिनियाँहरू राहदानी धारक हुन् र त्यो पहिले नै १ 10 करोड चिनियाँ हो। यदि त्यो संख्या आउँदो केहि बर्षहरुमा दोब्बर छ, तब तपाई सम्भाव्यताको कल्पना मात्र गर्न सक्नुहुन्छ।
हामी दशकौदेखि मोरीशसमा चिनियाँ उपस्थिति रहेको छ र त्यो इतिहासको आधारमा र चिनियाँ संस्कृति, मूल्य, परम्परा र भाषालाई बचाउन मोरिशसको सरकारको कटिबद्धताले पनि मरीशसलाई चिनियाँ पर्यटक आकर्षित गर्न कठिनाई हुनु हुँदैन। हामीसँग चिनटाउन छ जुन सेशेल्ससँग छैन, मालदीवसँग छैन। त्यसोभए हामीसँग समस्या छ यदि हामी चिनियाँ पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न असफल भयौं भने।
हामी एक धेरै सुरक्षित, रोगमुक्त र महामारी मुक्त गन्तव्य हो। सुरक्षा कुनै मुद्दा होइन। हामीसँग उत्कृष्ट सञ्चार र आईटी सेवाहरू छन्। मॉरिशसले चिनियाँ नयाँ वर्षलाई सार्वजनिक बिदाको रूपमा मनाउँछ। हामी पहिलो पटक चिनियाँ आप्रवासी मॉरिशस आएदेखि नै प्यागोडास गरिसकेका छौं। हामीसँग चिनियाँ समुदायका सदस्यहरू मोरिससको सार्वजनिक र निजी जीवनको सबै क्षेत्रमा भाग लिइरहेका छन्।
हामीसँग सफा हावा, सूर्य, सुन्दर परिदृश्य छ, हामीसँग चिया छ र यी सबै शीर्ष बिक्री बिन्दुहरू हुन्। मोरिशसको चिनो-मॉरिशियन चित्रको तस्वीर भएको नोट छ र चिनियाँ व्यञ्जन जताततै पाइन्छ। हामीसँग दशकौंदेखि चिनियाँ दूतावास छ र मॉरिशसको बेइजि inमा पनि यसको दूतावास छ।
हामीले चीनका धेरै शहरहरूमा नियमित रूपमा रोड शोहरू आयोजना गरेका छौं। हामीसँग सोशल मिडिया अभियानहरू छन्, हामीसँग सेलिब्रेटीहरू आए पछि निम्तो आएको छ। त्यसोभए समस्या के हो?
के यो एक दृश्यता / जागरूकता मुद्दा हो? के हामी सही कुरा गलत गरिरहेका छैनौं वा के हामी गलत काम गर्दैछौं जब हामी चीनमा मोरिशसलाई बढावा दिन्छौं? के हामी विज्ञापनमा कमी छौं?
हामीले चिनियाँहरुलाई आकर्षित गर्नु पर्ने आर्थिक मोडल के हो? यसैले म खुसी छु कि मेरो मित्र चीनको राजदूत यहाँ छ किनकि हामीलाई चिनियाँ अधिकारीहरुसंग यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न को लागी आवश्यक छ। र म निश्चिन्त छु कि यदि हामीले यो सही गरेमा चिनियाँ अधिकारीहरू हाम्रो पक्षमा छन् भने उनीहरू अफिसरका मुलुकहरूमा मोरिसस क्यारियर प्रयोग गर्नका लागि उनीहरूका कर्मीहरू लिन लगाउँदछन्। हामी त्यो व्यवसायको हिस्सा लिन सक्दछौं तर हामीले अधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्न आवश्यक छ। हामी सिल्लोमा अब काम गर्न सक्दैनौं, हामी नयाँ सम्भावनाहरूका लागि खुला हुनुपर्दछ, हामी सुझावहरूको लागि खुला हुनुपर्छ, कोही पनि सधैं सही हुँदैन। र यसैले मलाई विश्वास छ कि हामीसँग हामीले गरेका कामहरू गर्ने तरिकाको बारेमा सम्पूर्ण सिंहावलोकन हुनु आवश्यक छ।
मलाई ती मुद्दाहरू हाइलाइट गर्न फेरि जान दिनुहोस्।
के हामीले यस उद्देश्यका लागि हाम्रो हवाई पहुँच नीति समीक्षा गर्न आवश्यक छ?
के हवाई भाडा धेरै बढी छ? किनकि म सुन्न चाहन्छु कि हवाई भाँडा समस्याग्रस्त छ।
वायु जडानको बारेमा के छ? के हामीसँग भरपर्दो र नियमित उडानहरू छन्? के हामी हाम्रो वाहकको तालिका अखण्डता बारे सन्तुष्ट छौं?
हामीले कुन शहरहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ?
चिनियाँ पर्यटकहरू कस्तो प्रकारको आवास खोज्दैछन्? के हामीसँग चिनियाँ पर्यटकको सबै आवश्यकताहरु मिल्ने आवास छ?
के यो तथ्य हो कि चिनियाँहरू केवल विशेष अवधिहरूमा यात्रा गर्छन् जब उनीहरूको छुट्टी हुन्छन्? हामीले यो पत्ता लगाउन आवश्यक छ किनकि हामी मोरिससलाई बर्ष एक बर्षे गन्तव्यको रूपमा मार्केट गर्न चाहन्छौं। के हामी उनीहरु लाई सबै बर्ष उत्पादनको साथ आकर्षित गर्न सक्दछौं?
के हामीले चीनमा विशेष चासो समूहलाई लक्षित गर्नुपर्छ? के हामी गलत काम गर्दैछौं वा गलत काम गर्दैछौं?
के हामी सेवानिवृत्तहरूलाई लक्षित गर्न सक्छौं? सैनिकहरू? बच्चाहरू संग आमा बुबा? हनीमूनहरू? खेल मानिसहरू? गोल्फ? शिकार? फिशिंग? क्यासिनो?
मलाई पनि होटल उद्योगका कप्तानहरूको उपस्थितिमा केहि भन्न दिनुहोस्। म संसारभरि मेलाहरूमा जान्छु र चीजहरू सुन्छु र पर्यटनमन्त्रीको रूपमा मैले आफ्नो कर्त्तव्य सबै साझेदारहरूलाई बाँड्न मेरो कर्तव्य ठान्छु। चिनियाँ पर्यटकहरू ब्राण्ड नामका होटलहरूमा जान मन पराउँछन्। के हामी हाम्रो होटेलको ब्रान्डि ofको सन्दर्भमा सहि चीजहरू गरिरहेका छौं? म यस मुद्दालाई उद्योगका कप्तानहरूका लागि झण्डा लगाउँदैछु। यदि तिनीहरू चीन जानको लागि गम्भीर छन् भने, यस प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ।
के हामीसँग अधिक किनमेल सुविधाहरू र ब्रान्डेड उत्पादनहरूका लागि किनमेलहरू छन्?
के हामी सिंगापुरले जस्तै चिनियाँहरूका लागि किनमेल महोत्सवको आयोजना गर्न सक्छौं?
म यसो भनिरहेको छैन कि हामी अझै छौं तर हामीसँग road बर्षको लागि रोडम्याप हुन सक्छ? १० बर्ष? हामी मोरिससमा बिभिन्न किसिमको व्यवसाय आकर्षित गर्न सक्छौं।
के हामी बच्चाहरू सिक्न वा अन्य भाषाहरूमा पर्न सक्ने छुट्टि शिविरहरू आयोजना गर्न सक्छौं? र म पक्का छु कि अभिभावकहरू आफ्ना बच्चाहरूलाई शिक्षकमा छोडेर उनीहरूको बिदाको आनन्द लिन खुशी हुनेछन्। तर यी हामीले गर्न आवश्यक चीजहरू हुन्।
के हामीले महिलाहरू र सज्जनहरूले पनि मोरिसस र पुनर्मिलनको जुम्ल्याहालाई छुट्टी प्याकेजको रूपमा सोच्नु पर्छ? यो पूर्णता को अवधारणा अन्तर्गत भेनिला टापु संगठन भित्र गर्न सकिन्छ?
के हामीले पनि अन्य क्यारियरहरू आकर्षित गर्न आवश्यक छ? चीनबाट? वा हुनसक्छ केवल चीनबाट मात्र होईन?
के हामी गल्फ क्यारियर मध्येका एकलाई चिनियाँ पर्यटकहरू मॉरीशस ल्याउनको लागि आरम्भ गर्न सक्छौं?
मेरो चासो चीन मा चासो गुमाउन छैन। अझै पनी कठिनाइ हुन सक्छ तर हामी मानव पूंजी र अन्य स्रोतहरुको हिसाबले धेरै वर्षहरुमा गरिएको सबै लगानीहरुलाई भुल्न वा बिर्सन सक्दैनौं, र हामीले उपस्थित हुन र सबै सरोकारवालाहरु संग काम गर्न हामीले रणनीति बनाउनु पर्छ जुन हामी सुनिश्चित गर्दैनौं। बजार शेयर को कुनै अधिक हराउनुहोस्।
यस उद्देश्यका लागि एयर मॉरिशस सबैको साथ संलग्न हुनुपर्दछ र सबै सम्बन्धित सरोकारवालाहरू, विशेष गरी पर्यटन मन्त्रालय र एमटीपीएसँग परामर्श नगरी आफैले कार्यहरू गर्न सक्दैन।
म तपाईंको दयालु ध्यान को लागी धन्यवाद दिन्छु।
एयर माउरिटिअस राजदूत चीन चिनियाँ खाना चिनियाँ नयाँ वर्ष माल्दिभ्स Mauritius सेचिलिस सिंगापुर पर्यटन
वेस्टमिन्स्टर स्थलले यसको घटना टोलीमा थप गर्दछ